निदाएँ जगदम्बा :: नयनराज पाण्डे – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार ०८:१२ English
निदाएँ जगदम्बा :: नयनराज पाण्डे
र त्यसपछि अप्ठ्यारो मान्दै शरणकुमारले आफ्नी अर्धाङ्गिनी जगदम्बालाई कोठाको छेउमा रहेको दराजलाई देखाउँदै भने – ‘जगदम्बा ! मेरो अनिद्राको कारण, ऊ त्यही दराज हो।‘
‘आ………के राख्‍नू ? ल्याऊ खाल्टोमै हालौँ।‘ शरणले पारिजातका कृतिहरू पनि खाल्टोमा हाले ‘शिरीषको फूल‘ बाहेक।
दराजको एक खण्डमा राख्‍न मिल्ने किताबहरू सजाएर राखिन् जगदम्बाले। त्यसभन्दा माथिको खण्डमा आफ्नो चोलो र पेटिकोट राखिन्। अर्को खण्डमा मेकअपका सामानहरू राखिन्। एउटा खण्डमा आफ्नो नयाँ साडी, शरणकुमारको नयाँ दौरा सुरुवाल, कोट राखिन् र भनिन् – ‘यसपालि यही नयाँ लुगा लगाएर दरबारमा दसैँको टीका थाप्‍न जानुपर्छ।‘
२२ श्रावण २०७०, मंगलवार ०१:५४ मा प्रकाशित